Nadiifinta ceelasha gaarka ah - King County
私人水井消毒 사적소유의 우물물 살균 Дезинфекция частных колодцев Nadiifinta ceelasha gaarka ah
Desinfección de pozos privados Khử trùng các giếng nước của tư
Disinfection of private wells in Somali
Kiimikadu waa ay ka dhib badan tahay in la baabi'iyo. Kala tasho qaybta caafimaadka dadweynaha xal u helidda kiimikada.
Hay'adda Caafimaadka Dadweynaha ayaa biyaha ka baaraya in ay ku iraan coliform, balse ma ay baaraan kiimikada. Kharash ayuu baaritaanku leeyahay. Qalabka baaritaanka waxaad ka heli kartaa xafiiska xaafadda ee caafimaadka dadweynaha.